Global Voices teny Malagasy » Mpifaninana ho solontenan’ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin’ny filankevipitantanana GV 2020: Tanya Lokot · Global Voices teny Malagasy » Print
Mpifaninana ho solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny filankevipitantanana GV 2020: Tanya Lokot
Voadika ny 07 Avrily 2020 15:35 GMT 1	 · Mpanoratra Tetyana Lokot Nandika avylavitra
Tanya Lokot  teratany Okrainiàna, ary GV-er monina ao Irlandy mandalina ny resaka zo nomerika, ny fikatrohana ary ny fitantanana ny aterineto. Mpanao gazety teo aloha, nanjohy ny GV nanomboka ny taona 2013, voalohany indrindra tamin'ny maha-mpandray anjara an-tsitrapo, avy eo nandray anjara tamin'ny maha-tonian'ny famoahana ny RuNet Echo (hatramin'ny 2016). Nandray anjara tamin'ireo tetikasa hafa tato amin'ny GV ihany koa izy, toy ny Advox sy ny GV-Ex. Mpikambana amperinasa ao amin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina GV. Mahay ny tenimpirenena Okrainiàna, Rosiàna, Anglisy, Frantsay (eo ho eo ihany) i Tanya. Ny fahalinany ankoatra ny GV sy ny aterineto dia ny tononkalo, ny fanaovana mofo, ny hanitra ary ireo tanandehibe.
Ireo rehetra nirotsaka ho fidiana ho ao anatin'ny filankevipitantanana 2020 dia nasaina namaly ireo andiana fanontaniana vitsivitsy eto ambany. Aza misalasala mametraka fanontaniana fanampiny amin'i Tanya atao ao anatin'ny toerana ho an'ny fanehoankevitra amin'ity lahatsoratra ity!
Tato anatin'ny taona fito farany dia ny vondrompiarahamonina GV no tokantranoko, ary miantsehatra amin'ny endrika maro samihafan'ny rafitra anaty tambajotra GV aho. Efa nanao ny asan'ny mpirotsaka an-tsitrapo, nitàna toerana tamin'ny famoahana lahatsoratra sy nanampy tamin'ireo tetikasa marobe manokan'ny GV. Mpikambana tsy tapaka tao anatin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina GV. Tato anatin'ny taona vitsivitsy, tsy mbola navitrika toy izany aho tato anatin'ny vondrona, na dia mijanona ho fotoana betsaka amin'ny fiainako aza ny GV, ary tiako ny hanome domberina ho an'ireo GV-ers mpiaramiasa amiko sy hanokana sasantsasany amin'ny fotoanako hisoloana tena ny feo sy ny zava-mahaliana an-dry zareo ao anatin'ny Filankevitra GV. Heveriko fa fotoana lehibe fanararaotra ny miasa ho an'ny vondrompiarahamonina, ary tiako ny hieritreritra hoe ny traikefako miaraka amin'ny GV dia nanefy ahy ho afaka hirotsaka ho toy ny mpifaninana mahefa.
Amin'ny lafiny maro, misolo tena ireo GV-er mahazatra aho: mahay fiteny maro, niaina tany aminà firenena samihafa manerana ny tany, ary raha ny nizorako teo amin'ny lafiny asa dia fifangaroana asa fanaovana gazety, akademia sy asa tsy nitadiavana tombontsoa. Heveriko fa manomana ahy tsara izany amin'ny fisoloana vava ireo mpikambana mavitrika sy isankarazany ato anatin'ny GV rehefa tonga ao anivon'ny filankevitra. Mpandray fitenenana manana fahatokisana eny imasom-bahoaka aho ary afaka mihaino am-pitandremana, mamintina ny vaovao sy mitantana tarika maro mba hamokatra hevitra maro. Afaka hanampy ahy tsara ireny traikefa ireny amin'ny maha-Solontenan'ireo Mpirotraka antSitrapo. Mitatra mankany amin'ireo media ny tambajotrako, mankany amin'ny fiarahamonina sivily, ny tontolon'ny anjerimanontolo sady mitatra miampita ny sisintanin'ireo firenena, ary antenaiko ny hampiasa ireny rohy ireny hampahafantarana ny fandraisako anjara ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny GV, ireo fanapahankevitra aterany momba ny fivoaran'ny GV, ary ny fanohanana entiny ho an'ireo mpandray anjara an-tsitrapo.
Tena nahazendana ny nahita ny fiovàna vondrompiarahamonina nataon'ny GV tao anatin'ny taona roa farany. Tao anatin'ilay dingana fanovàna voalohany ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina aho, ary io no nampahafantatra ny fomba fijeriko ireo laharampahamehan'ny GV. Ny fijeriko azy ireny dia toy ny: a) fanohizana ny fanomezana lanja sy fanohanana ireo mpandray anjara an-tsitrapo, ary fikarohana làlana vaovao hampisy dikany ny asa ataon-dry zareo ho an'ny GV; b) fikarohana izay hahitàna famatsiambola ao anatin'izao tontolo miovaova be manerana ny tany izao sy fitadiavana làlana vaovao misy fahaizamamorona ho entina manohana ny iraka fototra ijoroan'ny GV, ny asan'ny trano famoahana vaovao, ary izay rehetra fandraisana andraikitra sy fiarahana miasa eo ambany fanevan'ny GV.
Nandany ny betsaka indrindra tamin'ny fotoanako aho nanaovana ny asan'ny tonian'ny famoahana sy ny asan'ny trano famoahana vaovaon'ny GV, ary mijanona hatrany ho singa iray manandanja amin'ny fisiana isanandro sy fiantrakan'ny GV io. Saingy efa hatry ny ela aho no nihevitra hoe misy koa fahafahana goavana ho an'ny fikarohana sy ny fandalinana ao anatin'ny vondrompiarahamonina GV (porofon'izany ireo tetikasa toy ny NewsFrames), araka izany dia tiako ny hitrandraka azy io lavidavitra kokoa sy hijery ny fomba hahafahan'ireo mpirotsaka an-tsitrapo manomboka, mandray anjara ary mahazo tombony avy amin'ireo hetsika santatra fanaovana fikarohana ato amin'ny tambajotran'ny GV.
Heveriko fa ny traikefa azo tamin'ny naha-tao anatin'ny Filankevitra dia tsy hoe fotsiny fahafahana iray hiasa ho an'ilay vondrompiarahamonina, fa koa vintana iray hianarana avy amin'ny hafa ao anatin'ny filankevitra, sy ao anatin'ny GV, mikasika izay fomba handaminana ny fitantanana sy ny fandraisana fanapahankevitra statejika ho anà tambajotra iray mahatalanjona toy ny GV. Heveriko fa ireny fahalalàna ireny sy io traikefa io dia sarobidy ho an'ireo rehetra solontenan'ny Vondrompiarahamonina GV ao anatin'ny Filankevitra, satria azontsika ampiasaina mivoaka lavitra ny GV mba hampahafantarana ny fomba fijerintsika ny fananganana vondrompiarahamonina sy fikambanana maro hafa ao anatin'ny fanahin'ny GV – amin'ny fanaovana ny tontolo ho toerana iray mendrika indrindra ao anatin'ilay dingana.
Amin'izao fotoana izao aho miasa ao anatin'ny tontolon'ny anjerimanontolo, araka izany dia manaraka lamina ny asako, fa koa mba malaladalaka ihany raha resaka fitantanana ny fotoanako manokana sy ireo ezako. Tsy ora feno kanefa nisahana ny asa maha-toniandahatsoratra tato amin'ny GV aho, ary taoriana kely, nandray anjara tamin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina GV, somary tamim-pahakingàna ihany, ary ny traikefako farany dia nidika fahazoana aina ho ahy rehefa niasa namakivaky ireo hasin'ora sy tanatin'ireo tontolo virtoaly maro. Fanampin'izay, ny fikarohana nataoko manokana dia nifantoka tamin'ny zo nomerika, ny fikatrohana ary ny fitantanana ny aterineto, araka izany dia tsy azo ihodivirana ny fandraisako anjara amin'ny fiainana sy ny asam-pikambanana toy ny GV, ary mitazona ireo fifandraisana amin'ny tambajotra erantany misy ireo GV-ers. Sady koa, tsy haiko ny hisaina ny fiainako tsy misy ny GV (fihetsehampo heveriko fa ananan'ny tsirairay amintsika), ka ny fiasàna ao amin'ny Filankevitra dia tafiditra tsara ao anatin'ireo fanolorantena hafa ataoko, toa toy ny mandeha ho azy.
Hanokan-tena aho ho eo mandrakariva ho an'ireo mpikambana ato amin'ny vondrona, amin'ny alàlan'ireo fantsona mahazatra, toy ny imailaka, Slack, sy ireo fitaovana hafa. Efa miomana ihany koa hiasa miaraka amin'ireo hafa mpisolo tena ny Vondrompiarahamonin'ny Mpirotsaka an-tSitrapo ao anivon'ny Filankevitra mba hisy tsy tapaka ny fotoana fanararaotra ho an'ny vondrontsika hifandraisana amintsika sy hampitàna amintsika izay hevitra sy ahiahin-dry zareo, mba hahafahanay mitondra azy ireny ho ao anivon'ny Filankevitra. Heveriko ihany koa fa ny fandraisako anjara tsy tapaka ao anatin'ny Filankevitry ny Vondrompiarahamonina dia hanome fahafahana hizara sy handray ireo fomba fijerin'ny vondrompiarahamonina momba ireo olana fototra ho an'ny GV, ary dia ho ampiasaiko izany ho fampahafantarana ihany koa ny asako ao amin'ny Filankevitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/04/07/147669/